PressReader - Ilanga: 2018-07-02 - Okulimaza i-Afrika ebholeni lomhlaba
Okulimaza i-Afrika ebholeni lomhlaba
Ilanga - 2018-07-02 - Imibono -
BUCACELA ngisho ingane ekhasayo ubumqoka bokudedelwa kwabadlali bakanobhutshuzwayo base-Afrika besebancane ukuyogijima emakilabhini adlala e-Europe egabe ngamaligi amakhulu emhlabeni. Ukuphuma ekuseni kwawo woyisihlanu amazwe abemele i-Afrika kwiNdebe yoMhlaba yeFifa, eqhubeka eRussia, kuyinkomba esobala yokuthi sisasilele kakhulu kulo mdlalo uma kuqhathaniswa namazwe ase-Europe nawaseSouth America, okuyiwona agiyayo kunobhutshuzwayo. Amazwe abemele i-Afrika kule midlalo yiSenegal, iNigeria, i-Egypt, iTunisia neMorocco.
Okucacayo ngamazwe asasele kulo mqhudelwano wukuthi abophele abadlali iningi labo eligijima emakilabhini ajwayele ukwenza kahle kwi-Uefa Champions League, okuwumqhudelwano othathwa njengonohlonzo kwedlalelwa ngamakilabhu.
Sikholwa wukuthi uma e-Afrika singaba nabadlali abaningi abagijima emaligini amakhulu e-Europe, bangabuya nesipiliyoni esisidingayo. Lokhu kucace bha emdlalweni weSpain nePortugal lapho uCristiano “CR7” Ronaldo ogijimela iReal Madrid yaseSpain, esizwe kakhulu wulwazi analo ngezitobha zeSpain. Udonga lweSpain lubophele abadlali beReal Madrid nabeBarcelona.
URonaldo, ongukaputeni wePortugal, ubazi kahle ubuthaka bazo njengoba edlala nazo masonto wonke kwiLa Liga. Kulo mdlalo ophele ngo-3-3, uRonaldo ushayele iPortugal amagoli amathathu. Siyabadinga oRonaldo abaqhamuka e-Afrika njengoba kuqale futhi kwagcina ngoGeorge Weah waseLiberia ukuthi leli lizwekazi libe nomdlali ohlonishwa umhlaba wonke njengoba enqobe umklomelo weFifa wokuvelela emhlabeni ngo1995.
U-Weah akagcinanga ngokuvelela nje e-Europe, uphinde wabuya nemali esize iLiberia ukuthuthukisa unobhutshuzwayo wakhona. U-Weah usanda kuqokwa njengomengameli wezwe eLiberia. Kwenzeka okufanayo nase-Argentina njengoba uLionel Messi ongukaputeni wayo ebuye ayisize ngemali ayigaya kwiBarcelona ukuyitakula. Kuyishwa ukuthi kuleli kuhlala kunemibiko yokuvinjelwa yizikhulu kwabadlali abasuke befunwa ngamakilabhu ase-Europe njengoba kwenzeka kuPercy Tau weMamelodi Sundowns ogaqelwe yiBrighton & Hove Albion FC yaseEngland. Kwenzeke esifanayo nakuTeko Modise esagijima kwiOrlando Pirates.
U-Steven “Schillo” Pienaar usanda kulibeka ngesihloko elokuthi unobhutshuzwayo wakuleli ngeke uthuthuke uma ungenabo abadlali abaqiniswe ukhakhayi yinselelo enzima yokudlala e-Europe. Uzeseke ngokuthi ijezi liyajulukelwa khona. Lo mdlali wakugcizelela ukuthi inhlonipho nokuzinikela kubamba elikhulu iqhaza ekuphumeleleni komdlali e-Europe. Amazwe ase-Afrika aphume ekuseni eRussia ngenxa yokubukeka ethatha kalula izinto kulo mqhudelwano, abadlali bawo benza amaphutha awubungane.
Kumele sikuvume ukuthi kasinazo e-Afrika izikhungo zezinga eliphezulu zokuthuthukisa abadlali njengoba iNingizimu Afrika inqobe iNdebe yoMhlaba yabadlali abaneminyaka engaphansi kwewu-12 ubudala ngo-2003. UDkt Irvin “Iron Duke” Khoza ongusihlalo wePremier Soccer League (PSL), usanda kutshela ILANGA ukuthi esinye isihlava esibulala ibhola kuleli (nase-Afrika) wukukokotelwa kweminyaka emazingeni aphansi. Kuyinto eyaziwayo ukuthi e-Europe abadlali bafakwa emishinini ehlola iminyaka yobudala ngokucubungula ukuguga kwamathambo. Yingakho abadlali abaningi base-Afrika abavelelayo ezigabeni zamajuniya, bengazitholi izinkontileka emaligini amakhulu aseEurope.